စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ - Hanukeii
ဤအထွေထွေအခြေအနေများသည် Indicom Europa 2015 sl (ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုပိုင်ဆိုင်သောကုမ္ပဏီ) အကြားဆက်နွယ်မှုကိုတိတိကျကျဖော်ပြသည် Hanukeii) မက်ဒရစ်၊ Bajo izquierda 41၊ မက်ဒရစ်၊ CIF ESB28010 နှင့်တတိယပါတီများ (နောက်ပိုင်းတွင် "အသုံးပြုသူများ") တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောရုံးခန်းဖွင့်ပြီးသုံးစွဲသူများအဖြစ်မှတ်ပုံတင်ရန်နှင့် / သို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်၏အွန်လိုင်းစတိုးမှတဆင့် ၀ ယ်သည်။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက် Hanukeii (http://www.hကျိုက်ထီးရိုး.com", နောင်မှစ။ " Store က) ။
၂.၁ အသုံးပြုသူသည်ယေဘုယျအားဖြင့်စတိုးကိုအသုံးပြုရန်၊ ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်ရန်နှင့်စတိုးဆိုင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုချင်းစီကိုဥပဒေ၊ ကျင့် ၀ တ်၊ အများပြည်သူဆိုင်ရာအမိန့်နှင့်ပြဌာန်းချက်များနှင့်အညီလုံ့လဝီရိယရှိရှိအသုံးပြုရန်သဘောတူသည် အထွေထွေအခြေအနေများနှင့်စတိုးဆိုင်၏ပုံမှန်လည်ပတ်မှုနှင့်ခံစားခွင့်များကိုအသုံးပြုသူများမှအဟန့်အတားဖြစ်စေ၊ ပျက်စီးစေခြင်းသို့မဟုတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်အခွင့်အရေးများကိုထိခိုက်စေနိုင်သောသို့မဟုတ်မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆိုသုံးခြင်းမှသင်ရှောင်ကြဉ်ရမည်။ Hanukeii၎င်း၏ပေးသွင်းသူများ၊ အသုံးပြုသူများသို့မဟုတ်တတိယပါတီ၏ယေဘူယျအားဖြင့်
3.1 Hanukeii Store မှတဆင့်အသုံးပြုသူများအားကမ်းလှမ်းသောထုတ်ကုန်များကိုအချိန်မရွေးဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်၊ သင်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို Store သို့ကမ်းလှမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ပါ ၀ င်သောပစ္စည်းများသို့ကုန်ပစ္စည်းအသစ်များထပ်ထည့်နိုင်သည်။ အကယ်၍ မဟုတ်ပါကဤကုန်ပစ္စည်းအသစ်များသည်ဤအထွေထွေအခြေအနေများပါပြgovern္ဌာန်းချက်များဖြင့်အုပ်ချုပ်လိမ့်မည်ကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာ ၀ ယ်ယူခြင်းနှင့်အသုံးပြုခြင်းကိုမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းမရှိပဲသို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုကြိုတင်အသိပေးခြင်းကိုရပ်ဆိုင်းပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၄.၁ အများဆုံး ၂၄ နာရီ (၂၄) နာရီအတွင်း၊ Hanukeii ဝယ်ယူမှုအတည်ပြု, အသုံးပြုသူမှအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဖော်ပြထားသောအီးမေးလ်က ၀ ယ်ယူရေးရည်ညွှန်းကုဒ်ကိုသတ်မှတ်ပြီးကုန်ပစ္စည်း၏ဝိသေသလက္ခဏာများ၊ စျေးနှုန်း၊ ပို့ဆောင်စရိတ်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ငွေပေးချေမှုအတွက်ကွဲပြားသောရွေးချယ်စရာများ၏အသေးစိတ်များကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ Hanukeii.
၄.၄ ပေးပို့လိုက်သောအမိန့်အတည်ပြုချက် Hanukeii ၄ င်းသည်ငွေတောင်းခံလွှာအဖြစ်မ ၀ ယ်ပါကဝယ်ယူမှုအထောက်အထားအနေဖြင့်သာမရှိပါ သက်ဆိုင်ရာငွေတောင်းခံလွှာကိုကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူပေးပို့လိမ့်မည်။
၅.၁ အသုံးပြုသူသည်သူဆက်သွယ်နိုင်သည့်ထုတ်ယူခွင့်ရှိသည် Hanukeii အောက်ပါလိပ်စာရှိအီးမေးလ်မှတဆင့်: contact @ hကျိုက်ထီးရိုး.com နှင့်ကုန်ပစ္စည်းလက်ခံရရှိခြင်းမှရေတွက်ပြီးသောခုနစ် (၇) ရက်ထက်မပိုသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း ၀ ယ်ယူခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကုန်ပစ္စည်းကိုမှန်ကန်စွာဖြည့်ထားသောပြန်လည်စာရွက်နှင့်အတူပေးပို့ရမည်။ ငွေဖြည့်သွင်းရမည့်ငွေတောင်းခံလွှာသို့မဟုတ်ငွေတောင်းခံလွှာ၊ ဖြည့်စွက်ပြီးသည်နှင့်ကုန်ပစ္စည်းကိုဝယ်သူက ၀ ယ်သည်။ ပြန်လာကြောင်းညွှန်ကြားချက်များနှင့်အညီလုပ်လိမ့်မည် Hanukeii ဆုတ်ခွာခြင်းလေ့ကျင့်ရေးအကြောင်းကြားစာကိုအသုံးပြုသူထံအကြောင်းကြားပါ။ အသုံးပြုသူသည်ကုန်ပစ္စည်းအား (၇) ရက်မှ (၇) ရက်အတွင်းပြန်လည်ပေးပို့ရမည် Hanukeii ပြန်လာ၏ပုံစံကိုညွှန်ပြ။
၅.၂ ထုတ်ယူခြင်းသည်ပေးဆောင်ရမည့်ငွေပမာဏကိုပြန်အမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက် ၀ ယ်ယူသူသည်ပြန်လာသည့်စာမျက်နှာတွင်အကြွေးဝယ်ကဒ်၏နံပါတ်နှင့်ကိုင်ဆောင်သူကိုဖော်ပြရမည် Hanukeii သင်ငွေပေးချေရမည်။ ငွေပေးချေမှုအတွက်ကာလကိုဥပဒေတွင်သတ်မှတ်သည်။
၆.၁ မည်သည့်အဖြစ်အပျက်မျိုး၊ မဆိုတောင်းဆိုပိုင်ခွင့်သို့မဟုတ်ကျင့်သုံးမှုအတွက်အသုံးပြုသူသည်ဆက်သွယ်ရန် @ လိပ်စာသို့အီးမေးလ်ပို့နိုင်သည်။ Hanukeii.com ။
7.2 ၏ပေးပို့ဝန်ဆောင်မှု Hanukeii ဒါဟာအသိအမှတ်ပြုဂုဏ်သိက္ခာ၏ကွဲပြားခြားနားသောထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးအော်ပရေတာနှင့်အတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည်။ အမိန့်များကို PO Box များ၊ ဟိုတယ်များသို့မဟုတ်အခြားအမြဲတမ်းမဟုတ်သောလိပ်စာများတွင်ပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
၈.၁ အသုံးပြုသူကစတိုးဆိုင်နှင့်ထုတ်ကုန်တစ်ခုချင်းစီ၏အချက်အလက်များ၊ ပါ ၀ င်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ပစ္စည်းများ၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်းနှင့်တင်ပြခြင်းနှင့်၎င်းတွင်အသုံးပြုသောကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုအသိအမှတ်ပြုသည်။ သူတို့နှင့်ဆက်ဆံရေးကိုအသိဥာဏ်ပညာနှင့်စက်မှုဆိုင်ရာပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးများဖြင့်ကာကွယ်ထားသည် Hanukeii သို့မဟုတ်တတိယပါတီများနှင့်အထွေထွေအခြေအနေများသည်စက်မှုနှင့်ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများနှင့်စပ်လျဉ်း။ ၎င်းတွင်ဖော်ပြထားသောအထူးအခွင့်အရေးများ မှလွဲ၍ အခြားမည်သည့်အခွင့်အရေးကိုမဆိုသတ်မှတ်ခြင်းမပြုရ။
8.2 ကခွင့်ပြုမဟုတ်လျှင် Hanukeii သို့မဟုတ်သက်ဆိုင်သည့်အခွင့်အရေးကိုတတိယပါတီပိုင်ရှင်များကဖြစ်သကဲ့သို့သို့မဟုတ်တရားဝင်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါကအသုံးပြုသူမှပြန်လည်ထုတ်ယူခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဖျက်သိမ်းခြင်း၊ ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာ၊ ဖြန့်ဖြူးရန်၊ ငှားရမ်းရန်၊ ချေးရန်၊ ရှေ့စာပိုဒ်တွင်ရည်ညွှန်းထားသောမည်သည့်အရာကိုမဆိုအများပြည်သူဆက်သွယ်မှုပုံစံဖြင့်အများပြည်သူသို့ဝင်ရောက်ခွင့်။ အသုံးပြုသူသည်ဆိုင်၊ ပစ္စည်းနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုစတိုးဆိုင်အသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်မိမိ၏လိုအပ်ချက်များအတွက်သာအသုံးပြုရမည်။ တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်။ စီးပွားဖြစ်အမြတ်ထုတ်ခြင်းမှရရှိသောပစ္စည်းများ၊ ဒြပ်စင်များနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုရမည်။ အတူတူ။
၈.၃ အသုံးပြုသူမှတည်ထောင်ထားသောမည်သည့်နည်းပညာပစ္စည်းကိုမဆိုရှောင်ကြဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်ကြိုးကိုင်ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ရမည် Hanukeii ဒါမှမဟုတ်စတိုးထဲမှာတတိယပါတီများက။
၉.၁ LOPD ဥပဒေ ၁၅/၉၉ နှင့်အညီ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များနှင့်မှတ်ပုံတင်ပုံစံမှရရှိသောအခြားအချက်အလက်များအပြင်ငွေပေးငွေယူ မှနေ၍ ပိုင်ဆိုင်သောအပြောင်းအလဲအတွက်ဖိုင်တွင်သိမ်းဆည်းထားလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အသိပေးသည် Hanukeiiနေသမျှကာလပတ်လုံး၎င်း၏ဖျက်သိမ်းခြင်းတောင်းခံသည်မဟုတ်အဖြစ်။ အဆိုပါကုသမှုသည်ရောင်းအားတိုးတက်ခြင်းနှင့်သေဒဏ်ပေးခြင်း၊ ထုတ်ကုန်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ၏တစ် ဦး ချင်းအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု၏တိုးတက်မှုအပြင်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောတတိယကုမ္ပဏီများ၏အာရုံစိုက်မှုကိုခံရလိမ့်မည် Hanukeii.
အလားတူစွာသင်၏အချက်အလက်များကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများအားသတ်မှတ်ထားသောရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ရရှိနိုင်လိမ့်မည်ဟုသင်အသိပေးသည်။ Hanukeii ၎င်းသည်ဤအချက်အလက်များအားအကောင်းဆုံးလျှို့ဝှက်စွာကိုင်တွယ်မည်ဖြစ်ပြီး၎င်းတို့အားတစ် ဦး တည်းသောသီးသန့်လက်ခံသူဖြစ်ပြီးလက်ရှိစည်းမျဉ်းများအရအခြားသူများအားတာ ၀ န်ပေးမှုများသို့မဟုတ်ဆက်သွယ်မှုများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
အသုံးပြုသူသည်အီလက်ထရောနစ်နည်းဖြင့်ပင်လွှဲပြောင်းခြင်းကိုတိုက်ရိုက်ခွင့်ပြုသည် Hanukeii နှင့်အထက်ပါအဖွဲ့အစည်းများ, စီးပွားဖြစ်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်မြှင့်တင်ရေးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်ပြိုင်ပွဲများ၏။ □ဟုတ်တယ်၊ လက်ခံပါတယ်။
၉.၂ အသုံးပြုသူသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဆက်သွယ်ခြင်းအားဖြင့်ရယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းတို့၏အခွင့်အရေးကိုကျင့်သုံးနိုင်သည် Hanukeiiဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ်ဖြင့် @ Hanukeii.com, သင်၏ NIF မိတ္တူတစ်ခုသို့မဟုတ်အစားထိုးမှတ်ပုံတင်စာရွက်စာတမ်းပူးတွဲပါ။
10.1 Hanukeii ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများအတွက်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစကားဝှက်များကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူသည်။ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့်ပေးသောဝန်ဆောင်မှုများကိုထိုစကားဝှက်များကိုအသုံးပြုလိမ့်မည်။ အသုံးပြုသူအနေဖြင့်လျှို့ဝှက်ချက်အားဖောက်ဖျက်ခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောမည်သည့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနှင့်အကျိုးဆက်များကိုအသုံးပြုသူသည်မိမိ၏တစ် ဦး တည်းသောတာ ၀ န်ခံမှုကိုအတင်းကျပ်ဆုံးနှင့်အကြွင်းမဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွင်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။ လုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ၀ န်ဆောင်မှုများကို telematic ရယူရန်အတွက်စကားဝှက်ကိုအသုံးပြုသူမှအချိန်မရွေးပြုပြင်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူကအကြောင်းကြားရန်သဘောတူသည် Hanukeii သင်၏စကားဝှက်အားခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲအသုံးပြုခြင်းနှင့်၎င်းကိုခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတတိယပါတီများကချက်ချင်းရယူခြင်း။
11.1 Hanukeii ၎င်း၏ ၀ န်ဆောင်မှုများတိုးတက်စေရန်၊ သွားလာရန်လွယ်ကူစေရန်၊ လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်၊ အသုံးပြုသူ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအကြိုက်များကိုအသုံးပြုရန်လွယ်ကူစေရန်နှင့်စတိုးအသုံးပြုခြင်းကိုခြေရာခံရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည်။ ကွတ်ကီးများဆိုသည်မှာကွန်ပျူတာ၏ hard drive ပေါ်တွင် (သို့) အသုံးပြုသူ၏ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်မှကြိုတင်စီစဉ်ထားသောဖိုလ်ဒါတွင် browser ၏မှတ်ဉာဏ်တွင်ထည့်သွင်းထားသောဖိုင်များဖြစ်သည်။